Momba anay - Tianjin Junya Precision Machines Co., Ltd.
Ny kalitao-voalohany, ny fahaiza-mamorona-laharam-pahamehana, ny fahamendrehana amin'ny serivisy
Manana ny orinasan-tsika manokana izahay, toerana any Huanghua City Hebei Province, izay mihoatra ny 5000 metatra toradroa ny velarany.
Tianjin Junya Precision Machines Co. Ltd dia orinasa miorina amin'ny kalitao, manokan-tena amin'ny famokarana miovaova amin'ny vokatra vy tsy misy vy.
Manana ny orinasan-tsika manokana izahay, toerana any Huanghua City Hebei Province, izay mihoatra ny 5000 metatra toradroa ny velarany. Mila adiny 2 fotsiny avy eo amin'ny trano fitahirizantsika mankany amin'ny seranan-dranomasina.
Miaraka amin'ny tsipika famokarana mandroso sy feno, ny vokatray dia azo ampiharina amin'ny sakany midadasika, toy ny fitaovana milina, kojakoja fiara, fitaovana enti-miasa, fitaovana fitsaboana sy sakafo, milina fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ect.
Fikarohana ny lohasaha bibilava fotsy
Ny faran'ny herinandro tamin'ny tapaky ny volana septambra lasa teo, ny orinasa Junya Precision Machines Company dia nandeha tany amin'ny White Snake Valley mba hananganana ekipa. Ekipa tanora sy mavitrika misy olona maherin'ny 20 no karakarain'ny Sampan-draharahan'ny fitantanana ny mpiasa, ny departemantan'ny varotra ary ny sampan-draharahan'ny haino aman-jery vaovao hankany Panshan "White Snake Valley" hanomboka ny tranon'ny ekipa.
Ho an'ity fananganana ekipa ity dia nandamina hetsika fiakarana tao amin'ny White Snake Valley izahay, izay mangatsiaka ny toetrandro ary tsara tarehy ny toerana. Miakatra ilay tendrombohitra mba hihaika ny tenanao, mankafy ny toerana tsara tarehy, ary mahatsapa ny oksizena voajanahary. Nandritra ny fizotry ny fiakarana dia nifanampy sy nifampahery ireo mpiasa ary niaraka tamin'ny ezaka niarahan'ny tsirairay, nahavita an'ity asa ity ny tendrombohitra rehetra.
Ny mpiasa dia tsy faly ara-batana sy ara-tsaina fotsiny, fa manatsara ny fihetsem-po koa. Nandritra io hetsika io dia niteny malalaka ny rehetra ary namorona rafi-piaraha-miasa mirindra.
Miasa mafy mitady tena tsaratsara kokoa. Tokony handroso mankany amin'ny nofinofisin'izy ireo tsy miankina izy ireo. Manome anao izay rehetra tadiavinao ny fotoana, fa mitandrina sy mandinika am-piasana izahay hamaha ny olan'ny mpanjifanay.
Mitombo ho azy
Mandehana mamaky ala
Nihanika ny korontam-bato
Ny fitaovana dia 304, 304L, 316,316L, SF8M, WCB, 14408, sns.
Fizarana fanariana fampiasam-bola, Valve indostrialy, Hazo fijaliana 316 Pipe Fitting Cross, Fittings Sodina tsy misy vy, Fitaovana fanariana famatsiam-bola, Valve vy vita amin'ny vy tsy miova,